TARATASY-kevitra - China Shandong Yulong Cellulose
sakafo kilasy ny sodium carboxymethyl cellulose (CMC)
kalsioma carboxymethyl cellulose (CMCCa)
croscarmellose ny sodium (CCNa)
solitany ary atsofony CMC & PAC
fampiasana indostrialy hafa CMC
TARATASY-kevitra Sodium carboxymethyl cellulose (CMC) dia tena mahomby papermaking mpandraharaha. Ny vahaolana aqueous manana fananana tsara toy ny rano ny fihazonana, film namorona, fahamarinan-toerana, pulp fibre vinanton'i sy ny hidiran'i, izay manao taratasy fibre mora ny vinanton'i, isan-karazany fillers dia zaraina mitovy kokoa amin'ny pulp sy hanatsarana ny hitovy-taratasy. Ny fampiharana amin'ny taratasy mifono dia afaka mifehy ny rheology ny coating sy amin'izay miely any amin'ny mpanome loko. Ny rafitra coating aza ...
Sodium carboxymethyl cellulose ( CMC ) dia tena mahomby papermaking mpandraharaha. Ny vahaolana aqueous manana fananana tsara toy ny rano ny fihazonana, film namorona, fahamarinan-toerana, pulp fibre vinanton'i sy ny hidiran'i, izay manao taratasy fibre mora ny vinanton'i, isan-karazany fillers dia zaraina mitovy kokoa amin'ny pulp sy hanatsarana ny hitovy-taratasy.
Ny fampiharana amin'ny taratasy mifono dia afaka mifehy ny rheology ny coating sy amin'izay miely any amin'ny mpanome loko. Ny rafitra dia aza coating sy miovaova, ny coating dia malefaka sy gloss, ary manana fananana tsara forming sarimihetsika.
Ao amin'ny dingan'ny ambonin'ny sizing, ny hery sy malefaka ny taratasy azo kokoa, ny anaovan'ireo fanoherana, malefaka sy ny hery ambonin'ny-taratasy efa nihamaro, ny ranomainty hisakana ny fiasan'ireny azo kokoa fananany sy ny fanontam-pirinty no toetra kokoa.
Amin'ny sizing fangatahana, CMC mampitombo ny fihenjanana sy ny firaiketam-po herin'ny kofehy, ary hanatsara hery sy ny diso mikasika ny Fahasarotana. Ampitomboy ny fihazonana tahan'ny isan-karazany additives, fillers sy kofehy kely.
Taratasy-kevitra kilasy CMC modely: PL-5, PL-10, PL-20, PL-30, PL60, PL100
Next: Toothpaste Indostria
BRC nahazo fankatoavana CMC Factory
China Cmc Simika
China Cmc Sakafo Grade
CMC Sakafo Grade
CMC solika ary atsofony Grade
CMC pampiasana ho an'ny Baking
CMC pampiasana ho an'ny zava-pisotro
CMC pampiasana ho an'ny mofo
Cmc ampiasaina amin'ny Ice Cream
Cmc ampiasaina amin'ny Juice
CMC pampiasana ho an'ny Lactic Acid zava-pisotro
CMC pampiasana ho an'ny ventin-Zava-pisotro
Ny sakafo Fibre
miharava ny Agent
ary atsofony Mud Cmc
Sakafo Additives CMC
Sakafo Grade Emulsifier
Sakafo Grade hihy
Sakafo Grade Stabilizer
Sakafo Thickener Agent
Halal nahazo fankatoavana CMC Factory
High Quality sady tsara Price CMC
Kosher nahazo fankatoavana CMC Factory
harena ankibon'ny tany Industrial Grade CMC
Taratasy fanaovana Grade CMC
Textile, fanontam-pirinty sy ny Fandokoana
Binhe Project Area, Yishui Economic Development Zone, Linyi City, Shandong Province, Sina.